SALAMO 59.1-17 F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 59.1-17 F. 2
TOKY SY FANANTENANA
Fitarainana sy tokin’ny olo-marina voaenjika(1-15). Hitan’i Davida ny haratsian-toetran’ny fahavalony, ny hafetsifetseny sy ny fahavononany hamono azy hatramin’ny farany. Fantatr’i Davida sady efa iainany koa fa Andriamanitra dia mahery lavitra noho izy ireo, mpiaro azo antoka indrindra, mpamonjy sy mpanafaka azy, fialofany amin’ny andro fahoriana (Salamo 46.1). Tsy nisalasala izy nitaraina Taminy, nangataka fiarovana sy fanafahana amin’ny fahavalo ary fitsarana ny ratsy fanahy mpanohitra an’Andriamanitra (5).
Fanontaniana : Raha tojo ady sarotra ianao,iza no hatoninao?
Ny fiderana an’Andriamanitra (16-17).
Nanampy an’i Davida tamin’ny fiatrehany ny adiny ny fiderana an’Andriamanitra.
Fiadiana entintsika mandresy ny fiderana :
Mahasoa kokoa ny midera an’Andriamanitra noho ny mitanondrika; Fanazaran-tena mahafinaritra atao fanao isan’andro satria misy mandrakariva nyfahatsaran’Andriamanitra ka tokony ankasitrahana Azy tsy mitsahatra izany; Manomana antsika hiatrika ny ady eo anoloantsika ; Miteraka fifaliana ary manomana antsika ho amin’ny fifaliana any an-danitra. Mitaky fomba fisaina mahay mankasitraka. Fisaintsaina. Ny fiderana marina dia mipololoitra avy ao am-po noho ny:
Fahitana ny maha Andriamanitra an’Andriamanitra, Fahitana ny asa izay ataony amin’ny fiainantsika andavanandro, Fanantenana sy finoana ny teny
fikasany amin’izay mbola hataony amin’ny ho avy (Salamo102.18b).
Hafatra: Sambatra izay olona ao anatin’ny fizahan-toetra sy fijaliana ka mitodika amin’Andriamanitra ho mpiaro sy mpanafaka azy dia Ilay Andriamanitra manao fanekena manokana aminy noho ny amin’i Jesoa Kristy
(Apokalipsy 3.20, Filipiana 1.21).
Fanasana: Fidio ny hiaina izao taona vaovao izao miaraka amin’Andriamanitra,anaty fo feno fiderana sy fankasitrahana mandrakariva.